Shiinaha Mashiinka Xawaaraha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida leh oo afar-madax ah (nooc farabadan) Sunkia
Mashiinka Xawaaraha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gaarka ah
Moodel dhakhso leh oo otomaatig ah oo leh nidaam isku dheelitiran oo midab keliya leh, oo leh xawaare ugu sarreeya oo ah 90 mitir daqiiqaddii, taasoo awood u siineysa koror ballaaran oo dhanka wax soo saarka ah.
Model Moodel dhaqso leh oo otomaatik ah oo leh nidaam isku dheelitiran oo midab keliya leh, xawaarekiisuna yahay ugu badnaan 90 mitir daqiiqaddii, taasoo awood u siineysa koror ballaaran oo dhanka wax soo saarka ah.
Model Qaabka loo yaqaan 'XJB' wuxuu ku qalabaysan yahay nidaamka mindi hawo ee nidaamka dahaadhka UV si mishiinku si fudud UV ugu xoqi karo waraaqda khafiifka ah. (Nidaam kale oo mindi hawo ah ayaa laga iibsan karaa salka Nidaamka dahaadhka saliidda).
System Nidaamka ka saarista budada laba-geesoodka ah wuxuu hubin karaa nadiifinta dusha sare ee warqadda ka hor inta aan la xoqin, si loo hagaajiyo tayada wax lagu qurxiyo.
Lamp Laydhka UV ee daweynta & qalajinta UV wuxuu leeyahay laba nooc: si buuxda u iftiiminta iyo dawladaha iftiiminta ee semi-light, kuwaas oo kordhin kara nolosha adeegga laambadda UV. Siraha UV-ga waxaa kor iyo hoos ugu dhaqaajin kara nidaamka cadaadiska hawada marka ay jirto xaalad deg-deg ah si loo hubiyo amniga loona yareeyo khasaaraha.
Nidaamka muraayadda UV wuxuu korsadaa giraangirta birta ee rogaal celinta si loo xakameeyo dhumucda saliidda, iska ilaali inaad riixdo shaag caagga ah
iyo in la hubiyo saliid isku mid ah. Nidaamka quudinta warqadda oo si otomaatig ah u shaqeeya iyo nidaamka ka saarista boodhka laba jibbaaran (XJT / B-4). Budada waa la riixi karaa marka hore, ka dibna boodhka ayaa lagu dhaqi karaa biyo nadiif ah si loo hubiyo tayada dahaadhka.
Nidaamka daaweynta UV ee la soo dejiyey Nidaamka daweynta UV wuxuu leeyahay laambad buuxda iyo nal nal nambarkiisa kaas oo kordhin kara amaanka isla markaana yareyn kara qasaaraha, sidoo kale wuxuu dheereyn karaa nolosha laambada UV.
Nidaamka qallajinta saliidda ee hoose wuxuu u adeegsadaa 18 tuubooyin quartz tayo sare leh qallajinta degdegga ah. Sanduuqa xakamaynta ayaa korsanaya qalab dayactir oo tayo sare leh oo la soo dhoofiyay si uu mashiinku ugu istaago si deggan oo habsami leh.
Ugu badnaan Xajmiga Xaashida (W * L)
Min. Xajmiga Xaashida (W * L)
3 xabbadood oo laambad UV ah
Qiyaasta Mashiinka (L * W * H)
Hore: Mashiinka Xawaaraha Sare ee otomaatiga ah iyo Calendering Mashiinka
Xiga: Aaladda Xawaaraha Sare ee Tooska ah ee 'UV Spot Varnishing' (Waxqabadyo Dual ah, warqad qaro iyo mid khafiif ah labadaba)